Wax Ka Baro Taariikhda Kooban Xidiga Cabdicasiis Catoosh %
Wax Ka Baro Taariikhda Kooban Xidiga Cabdicasiis Catoosh
By Ramzi Yare	 On Sep 11, 2018
Magaciisa oo buuxa waa C/casiis Maxamed Catoosh, waxa uu ku dhashay Degmada Yaaqshiid ee Gobolka Banaadir.
Catoosh ayaa ku soo baxay xirfadle ku cayaara lugta bidix, garoomada yar yar ee xafaadaha ku yaala ayuuna ahaa mid aad uga dhexmuuqda, sidoo kale Catoosh ayaa intuu yaraa kusoo baxay xiddig ku wacan tuurista rigooroyinka ama gool ku laadyada.
Bilowgii sanadii 2010 ayuu ku biiray kooxda Muqdisho United oo markaas lagu magaabi jiray Badbaado oo wagaa cayaareysay Horyaalka heerka labaad, kaas oo lagu qabtay Garoonka Iskuul Buluusiya.
Dhanka kale xiddigaan ayaa loo magacaabay dhammaadka sanadii 2010 ciyaartoyda mataleysa tartanka Gobollada ee Gobolka Banaadir ee markaas lagu marti galinayey magaalada Garoowe ee Gabolka Nugaal, markaasoo uu Gobolka Banaadir ku soo guuleystay koobka, waxaana xilligaasi macallinkii watay Gobolka Banaadir uu ahaa C/llaahi Siyaad, waxayna ku beegnayd 31 bishii December sanadkii 2010-kii.
Xiddigan ayaa marki uu dib ugu soo laabtay magaalada Muqdisho ku biiray kooxda Horseed sanadii 2011, asagoo xirnaa maaliyadda kooxda xoogga dalka hal sano oo kaliya, wax koob ahna kulama uusan guuleysan inta uu ka midka ahaa HORSEED.
Bilowgii sanadii 2012 oo dib loo aas-aasay kooxda LLPP Jeenyo ayuu ka qeeb noqday cayaartoydii lagu aas aasay kooxdaas.
C/casiis Catoosh ayaa inta uu ka tirsanaa kooxda LLPP Jeenyo kula guuleystay labo koob oo Janaraal Daa’uud ah, hal koob oo Super Cup ah iyo laba koob oo munaasabado ah.
Catoosh ayaa kooxda uu sagootiyey ee Jeenyo ka khasaariyey gool ku laad kulankii Final-ka Super Cup-ka Soomaaliya oo dhacay maalintii Jimcaha oo ay taariikhdu ku beegnayd 11/11/2016, kaasoo ay hanatay kooxda Banaadir Sports Club.
Ugu dambeyn C/casiis Maxamed Catoosh ayaa macsalaameeyey kooxda LL.PP Jeenyo, taageerayaasha iyo maamulka kooxdaas wuxuu si rasmi ah ugu biiray kooxda Dekedda.
Dekedda ayaa xidigan ku sugna mudo hal sano isago kula guuleystay horyaalka Somali Premier League, Sanadkii 2016-kii.
Kadib hal sano xidigan ayaa ku biiray naadiga Ciidanka Booliska Soomaaliyeed ee Heegan Fc, wuxuuna ahaa hogaamiyahooda balse xidigan ayaa iskaga hayaamay kooxda Heegan, mudo hal sano kadib.
Catoosh ayaa kamid ah xidigaha ugu wanaagsan horyaalka Soomaali Premier League, wuxuuna dib ugu laabtay kooxdiise hore ee Dekedda.
Basquets Oo Furta Tuurtey: “Messi Wuxuu Ahaanayaa Kan Dunida Ugu Fiican Inta Uu Ka Fadhiisanayo”
DEG-DEG: Cabdicasiis Catoosh ayaa si rasmi ah uga tagay naadiga Ciidanka Booliska ee Heegan Fc